Berbera: Kulan ku saabsan Nashaqadaynta magaalada oo ay iska kaashanayaan Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Dawladda Hoose | Berberanews.com
Home WARARKA Berbera: Kulan ku saabsan Nashaqadaynta magaalada oo ay iska kaashanayaan Wasaaradda Hawlaha...
Berbera: Kulan ku saabsan Nashaqadaynta magaalada oo ay iska kaashanayaan Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Dawladda Hoose
Berbera(Berberanews)-Kulan balaadhan oo lagu daah-furay nashqadeynta Magaalada Berbera ee Mustaqbalka, ayaa maanta lagu qabtay Magaaladaas, waxaana soo qaban qaabiyey Wasaarada howlaha guud, Guriyeynta iyo Dhulka iyo Dawladda hoose ee Degmada Berbera.
Mashruucan Qorsheynta iyo nashqada Magaalada Berbera oo muddo taagnaa, isla markaana ay maal-geliso Hay’adda UN HABITAT, ayaa waxa lagu lafa-gurayaa muuqaalka magaaleed iyo deegaan ee Magaaladan.
Furitaankii Shirkan waxa ka hadlay Isuduwaha Wasaarada Howlaha guud, guriyeynta iyo Dhulka Mursal Cabdilaahi Ismaaciil, kaasoo faahfaahin ka bixiyey dhabaha uu ku socon doono mashruucani iyo ujeedada laga leeyahay in mustaqbalka loogu gogol-xaadho nooca magaalo ee ay noqon doonto Berbera.
Waxa kale oo iyaguna halkaa ka hadlay Saraakiil ka socda Dawladda hoose ee Berbera iyo Hay’adda Mashruucan maal-gelinaysa ee UN-HABITAT, kuwaasoo sharaxaad ka bixiyey doorka ay ku leeyihiin hir-gelinta qorshahan iyo faa’idooyinka uu leeyahay.
Magaalada Berbera oo ah magaalo istaraatiijiya, ayaa waxa sanadahan dambe loo soo jeestay dib-u-dhiskeeda iyo maal-gashiyo ay marti-gelinayso mustaqbalka.
Previous articlewararkii u dambeeyay ee khasaaraha qarax weyn oo ka dhacay Muqdisho
Next article“Nabadgelyadu waa lama huraan” Suldaan Maxamed Cabdiqaadir